तपाईंले आफ्नो व्यवसायको लागि उपयुक्त भेट्टाएपछि वेब स्रोतहरू चाहिन्छ, तपाइँ टिप्पणीकारहरूको निम्न ब्लगहरूद्वारा उनीहरूको ब्लगमा शाखा बाहिर जारी राख्न सक्नुहुन्छ।. यसले तपाईंलाई साथी साथीहरूको आधार बढाउन मद्दत गर्नेछ.
तपाईंको ब्लग को व्यवस्थित गर्दै छन्
तपाईंको उद्योग मा ब्लग को ट्रैक राखन को लागी Google Reader मा RSS सदस्यताहरु को उपयोग गर्नुहोस।. प्रत्येक विषय वेबसाइटको लागि फरक फोल्डरहरू सिर्जना गर्नुहोस्. यस प्रक्रियालाई स्ट्रिमिङ गर्दै, तपाइँ कुन कुन सामग्रीहरू भर्खरै अद्यावधिक गरिएका छन् जुन देख्नेछन्.